I-Liverpool isematheni – ngazo zonke izizathu ezingafanele | Scrolla Izindaba
I-Liverpool isematheni – ngazo zonke izizathu ezingafanele
NgoLwesine ebusuku ompetha be-English Premier League bahlulwe ngegoli elilodwa eqandeni idlala ne-Burnley – nokuqeda imidlalo engama-68 yeligi ingakahlulwa e-Anfield.
Ukugcina kwabo ukuhlulwa ekhaya kwakungowezi-2017 futhi ngaphezu kwalokho, lokho kwehlulwa kwandise ukugijima kwabo bengaphumeleli kwaba yimidlalo emihlanu ilandelana.
Kepha akupheleli lapho!
Ama-Reds manje ahlulekile ukuthola amaphuzu emidlalweni emine ye-Premier League ilandelana kanti lokhu kugcine ukwenzeka eminyakeni engama-21 edlule.
Ukwengeza usawoti emanxebeni, iphenathi enikeze i-Liverpool ukunqoba umdlalo, yashaywa ngu-Ashley Barnes oshaye igoli lakhe le-100 leligi futhi waqeda iminyaka engama-46 elinde uBurnley ukuthi anqobe e-Anfield.
Ukwehlulwa kwe-Liverpool kuyibeke ngaphansi kwengcindezi enkulu. Manje isele ngamaphuzu ayisithupha kubaholi be-log i-Manchester United futhi ukuvikela kwayo isicoco kuphumile ezandleni zayo. Yize kuzofanele iqale ukunqoba imidlalo ngokuphuthuma, futhi kufanele ithembele kwamanye amaqembu ukushaya labo abangaphezulu kwabo.
Umqeqeshi uJurgen Klopp unqabile ukusola abadlali bakhe abaphambukile ukubatwalisa umthwalo ophelele ngokulahlekelwa ngamagoli.
“Bekungenakwenzeka ukuthi sehlulwe kulo mdlalo, kodwa kwenzekile lokho futhi yiphutha lami,” kusho uKlopp etshela i-Sky Sports.
“Kungumsebenzi wami ukuqinisekisa ukuthi abafana banesimo esifanele, nokuzethemba okufanelekile ukuze benze izinqumo ezifanele.”
UKlopp unezinsuku ezimbili kuphela ukuzama ukucija abagadli bakhe. NgeSonto ngehora lesikhombisa ebusuku bazobhekana ne-Man United emdlalweni onzima we-Ndebe ye-FA.
La maqembu womabili azolwa okwesibili esikhathini sezinsuku eziyisikhombisa e-Anfield. Umhlangano wabo wokuqala bekungumdlalo weligi ophele ngokulingana.
Picture source: @footballtweet